Soo-saareyaasha & alaab-qeybiyeyaasha Laminating-free Solution-Free
WD8212A/B Laba-Qeyb Adag oo Laminating Laminating Adhesive Waayo Baakadaha Dabacsan
Badeecad daaweyn degdeg ah oo ku saabsan 24 h wakhtiga daaweynta. Waa badeecad guud oo loo isticmaalo baakadaha ugu badan, sida cunto fudud, dhejis, buskud, jalaato, iwm.
WD8262A/B Laba-Qeyb Koollada Dahaarka Dahaarka leh ee Baakadaha Dabacsan
Haddii aad haysato alaab -bireedyada Alu, qaabkani wuxuu kuu noqon doonaa doorashada ugu fiican. Codsiga wuxuu u dhexeeyaa ballaaran oo ay ka mid yihiin caag/caag, Alu/caag ah. Baakadaha warshadaha & karsan waa codsiga ugu badan. Waxay leedahay awood isku xirnaan sare waxayna iska caabin kartaa 121 ℃ muddo 40 daqiiqo ah.
WD8118A/B Laba-Qeyb Koollo Dahaarka Dahaarka leh ee Baakadaha Dabacsan
Badeecadani waxay caan ku tahay macaamiisheena. Waxay ku habboon tahay inta badan badeecadaha guud, sida PET/PE, PET/CPP, OPP/CPP, PA/PE, OPP/PET/PE, iwm. Muuqaalkeeda si sahlan loo nadiifiyo waxaa had iyo jeer ammaanay hawlwadeennada dahaarka. Iskudheellitirnaantiisa hooseysa, xawaaraha dahaarka leh wuxuu gaari karaa ilaa 600m/min (waxay kuxirantahay agabyada & mashiinka), oo leh tayo sare.
WD8117A/B Laba-Qeyb Adag oo Laminating Laminating Adhesive Waayo Baakadaha Dabacsan
Qaabkani wuxuu hagaajiyaa waxqabadka lakabka gudaha, isagoo keenaya khilaaf hoose. Haddii mashiinka samaynta bacdu uu leeyahay xawaare sare, qaabkani wuu ku caawin doonaa.